बोक्सी प्रकरणमा दोषीलाई जोगाउन खोज्ने घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर चौधरीमाथि गोली प्रहार
फागुन २८, २०७४| प्रकाशित २१:०३
कैलाली– कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमथि गोली प्रहार भएको छ। घरमै बसिरहेका बेला सोमबार साँझ चौधरीमाथि आक्रमण भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडले जनाएको छ।
उनको कम्मरमुनि गोली लागेको र टाउकोमा खुकुरी प्रहार भएको प्रहरी निरीक्षक कर्णसिंह कार्कीले बताए। घाइते चौधरीको घोडाघोडी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि उनलाई थप उपचारका लागि कोहलपुर लगिएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनको अवस्था अहिले गम्भीर छ। उनलाई घोडाघोडी अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गरेपछि कोहलपुर अस्पतालमा रिफर गरिएको हो।
सोमबार बेलुकी ८ बजेर १० मिनेटको समयमा घरमै बसिरहेका बेला दुई मोटरसाइकलमा आएका ४ जनाले चौधरीमाथि गोली प्रहार र आक्रमण गरेका थिए।
चौधरीमाथि आक्रमण गरेपछि दुई जना मोटरसाईकलमा र दुई जना मोटरसाइकल छोडेर नगर प्रमुखको घरबाट पश्चिमतर्फ रहेको जंगलतिर भागेका थिए। से२प ३६७१ नम्बरको मोटरसाईकल प्रहरीले नगर प्रमुखको घरबाट बरामद गरेको छ। सो मोटरसाइकलमा आक्रमणकारी आएका थिए।
चौधरीको घरभन्दा ३० मिटर दूरीमा रहेका रामबहादुर महराले भने, 'आक्रमण हुन थालेपछि नगर प्रमुख चौधरीले बचाउ बचाउ भनेको सुनेर घरमा पुग्दा आक्रमणकारी भागे।' महराले नै चौधरीलाई सुखडको घोडाघोडी अस्पतालमा मोटरसाइकलमा राखेर पुर्‍याएका थिए।
प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार बोक्सी आरोपमा राधा चौधरीमाथि कुटपिट गर्नेलाई जोगाउन खोजेका मेयर चौधरीलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरी इन्चार्ज महानको हस्ताक्षरमा सोमबार बिहान नगर प्रमुख चौधरीलाई कारबाही गर्ने भनेर विज्ञप्ति जारी भएको थियो।
गत बिहीबार घोडाघोडीमै राधा चौधरीमाथि ‘बोक्सी’को आरोपमा झाँक्री रामबहादुर चौधरीले कुटपिट गर्दा मेयर ममताप्रसाद चौधरी रमिते बनेको र प्रहरीले पक्राउ गरेका दोषीलाई छुटाउन पहल गरेको आरोप लागेको छ। मेयर चौधरीले राधा चौधरीलाई बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने दोषीलाई प्रहरीबाट छुटाउन खोजेका थिए।
Saley mayorlae "NEKAPA YEMALEKO BEZZAT GARITHIYES" yehi hunu thiyo twalaii... Vaihalyo thik garnuh vayo .. Jo kohilae garnuhvayo
हाम्रो समाजमा अझैपनी अन्धबिस्वास कुरिती,जातिय,लैङ्गगिक, सास्कृतिक,धार्मिक, सामजिक साम्प्रदायिक हिंसाहरु उतिनै छ यसको सानो एउटा उदाहरण हो घोडघोडिको घटना । यो एकदमै हिसात्मक घटना हो यो घटनालाइ ढाकछोप गर्न खोजेको चाहिँ स्पस्ट देखिन्छ मेयरले । एउटा जनप्रतिनिधि भएर यस्तो सामजिक अपराध र अपराधीलाई बचाउनु र बेबस्त गर्नु भनेको आफै अपराधी हुन । कसले गोलि हान्यो कारबाही गर्यो भन्ने कुरा कति न्यायोचित छ त्यो भन्न सकिएन ।
Keshab Kumar Rai
गोली नै चाहिँ हान्नु हुन्नथ्यो कारबाही गर्नै पर्छ यसरी नै हो ठुलो नेता हरु लाई कार्बाही गर्ने। नियमपुर्बक प्रशासन मा गयो भने पार्टी को पावर के को पावर भन्यो उल्टो सम्मान र आत्माबल बदाएर आउछ जनता लाई हेप्नु!! कानुन गरिब साधरण जनताको लागी मात्र हो "काक्रो चोर लाई मुड्के सास्ती" सलाम छ बिप्लब वा जो कोहि।
अपराध गर्ने हतियार हो भने अपराध छुपाउने खास अपराधी हो सहि मान्छेलाइ गोलि हानिएछ ,, खुशी लाग्यो! एस्ता बौद्धिक भनाउदा पार्टीको झोले चम्चेहरु धर्ती को लागि बोझ हो! गुण्डा भ्रष्ट कृतेहरुले चलाएको देशमा बिबेक भन्दा बल नै प्रयोग गरेर शान्ति सुब्याबस्था ल्याउन सकिन्छ! जस्ले कारबाही गर्यो १०० आनै ठिक छ!
पिडित युवतिकाे कथा सुन्दा मेराे पनि सबै भन्दा धेरै आक्राेस मेयर प्रति नै थियाे । त्यसैले युवतिकाे घटनामा मेयरकाे प्रतिक्रियाले सबैलाई मर्माहत बनाएकै हाे तर मेयरलाई कुटपिट गर्ने या हत्या गर्ने भन्दा पनि याे बिषयलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । संसदमा बलियाे मुध्दा बन्न सक्छ । महिला हिंसाकाे बिरूध्दमा एउटा आन्दाेलन उठन सक्थ्याे , सथि प्रथा जस्तै बाेक्सि प्रथा लाई सदाकाे लागि अन्त्य गर्न सके बाकि युवतिहरू यस्ताे दिन भाेग्न नपर्ने थियाे । त्यसैले कसैलाई मार्नु भन्दा युवतिकाे घटनालाई संसद सम्म पुर्याउ , महिला हिंसाकाे एउटा राष्ट्रिय आन्दाेलनकाे निर्मार्ण गराैं भन्न चाहान्छु । मेयरलाई राष्ट्र र जनताले कार्वाहि गर्ने छ ।
यास्तो मेयरबाट आमले के सिक्ने? कसरी भयो मेयर ?
जस्ले जे गर्यो ठिक गर्यो।अझ कम भयो।
नवीन कुमार मगर
अपराधी भन्दा पनि त्यो अपराधीलाई जोगाउन खोज्ने चाहिँ महा अपराधी हो एउटाि महिला माथी क्रूर ब्याबहार गरेर लगातार ६ घन्टा सम्म लात्ती र मुक्का प्रहार गरेको भिडियो हरु सारा संसार भरि भाइरल भइ रहदा पनि अझै अपराधी लाई बचाउन लागि परि रहन्छ भने यस्ता मेहेर देखि आम जनताले के आसा गर्ने ???
Goli Hannu Agadi yaslaai pani Tyasari nai Lattai Latta Ra Mukka Prahar gari haat khutaa Bhachnu parne Thiyo, yasta le Bachnu Hudaina, yasta laai aafno Nagar ko neta Manne kailali ka janata le Bujhnu parchha Aba ko yug Ma yasta papi laai Thau chhaina aaj ko Goli Le Yo namare pani Yo Bholi Bato ma Eklai Hidna Paune chhaina.